Yeonnam-dong cafe 223-14 - I-Etourism
Yeonnam-dong cafe 223-14
I-161-10 Seongmisan-ro, Yeonnam-dong, Mapo-gu, Seoul
Isiteshi seYunivesithi yaseHongik (umugqa ongaphansi kuka-2), siphuma i-3
NgoMsombuluko kuze kube yiSonto: sisuka e-11am siye e-9pm
Eduze kwe-10 000 wons / person.
Yeonnam-dong Café 223-14 isitolo sekhofi esiyingqayizivele esisemigwaqweni emincane yaseHongdae eSeoul. Kutholakale ukugqugquzelwa kusuka kwidrama yaseKorea ethi "W - Worlds Two", lapho abalingiswa abasemqoka bangene ezweni elithandekayo le-webtoon. Impela ingaphakathi lalesi sitolo sekhofi limnyama futhi limhlophe okwenza uzizwe sengathi ungena nje encwadini yamahlaya. Le khofi inikeza namaqebelengwane amnandi namnandi neziphuzo, amakhasimende angakujabulela ngenkathi ethatha izithombe ezinhle.